मोरङको पाटी गाउँमा म्याराथुन प्रतियोगिता हुने - Limbuwan khabar
मोरङको पाटी गाउँमा म्याराथुन प्रतियोगिता हुने
मङ्गलबार, ०२ मंसिर, २०७७ दिउँसोको ०१:०६ बजे, लिम्बुवान न्युज
कबिन तुम्बापो लिम्बु
मोरङ । मोरङको केराबारी गाउँपालिका–१, पाटीगाउँमा पहिलो पल्ट दौड (मिनी म्याराथुन) प्रतियोगिता सन्चालन हुने भएको छ ।
खेलकुदको माध्यमबाट नयाँ पुस्ताका युवाहरुमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने हेतुले मिनी म्याराथुन प्रतियोगिता गर्न लागेको हो ।
अहिले विश्व नै कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को कारण आक्रान्त बनेको र खेलकुद क्षेत्र .पनि अस्त ब्यस्त भएको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा सन्चालन गरिने प्रतियोगिता यस ठाउँको लागि पहिलो, नौलो र उर्जाशिल हुने आयोजक सदस्य डेभिड लिम्बुले बताए ।
यस दौडमा १५ देखि ४० बर्ष उमेर पुगेका महिला, पुरुषले सहभागिता जनाउन पाउने छन् । सहभागी पुरुष खेलाडिले ५ कि.मि. दौडनु पर्ने छ । जसको लागि पाटी गाउँबाट सुरु गरेर किरातेश्वर फाल्गुनन्द माङ्हिम पुगे पछि पुनः सोही सुरुवाती ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै महिला खेलाडीले ४ कि.मि. दौडनु पर्ने छ । जसको लागि पाटी गाउँबाट सुरु गरेर कुमाल इभान्जलिकल चर्च पुगे पछि पुनः सोही सुरुवाती ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ ।
सहभागी पुरुष महिला दुबै तर्फका प्रतियोगीलाई समान रुपमा पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रथम हुनेले नगद रु. ५००० रुपैयाँ, मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र, द्धितीय हुनेले नगद रु.३००० रुपैयाँ मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र र तृतीय हुनेले नगद रु.२००० रुपैयाँ, मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । त्यस यता दशौं स्थानसम्म हाशिल गर्ने सबै प्रतियोगीहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै म्याराथुन दौडमा सहभागिता जनाएर नेपाललाई पदक समेत दिलाएका खेलाडी किरण लिम्बुको संयोजकत्वमा म्याराथुन दौड सन्चालन गर्न लागेको हो । यस दौड मंसिर ५ गते सन्चालन हुने छ । सल्लाहकार सुक्र आङ्देम्बे, किरण लिम्बू, डेभिड लिम्बू, बिपुल मगरले आयोजना गर्न लागेका हुन ।
केराबारी–१ का वडाध्यक्ष चन्द्रसिंह लिम्बुको प्रमुख आतिथ्य र समाजसेवि, बुद्दिजिवी र राजनितिक ब्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा खेल सुचारु गर्ने राज सानू चबेगुले बताए ।